DIGNINIIN: muslimiinta waa in ay iska ilaaliyaan magacyadan, isticmaalkoodana waa halis#aqriso macluumaad | Xaqiiqonews
DIGNINIIN: muslimiinta waa in ay iska ilaaliyaan magacyadan, isticmaalkoodana waa halis#aqriso macluumaad
ka soggow dagaal muslimiinta iyo dadka aan muslimiinta aheyn ka dhexeeya ee tooska waxaa jira duulaan kale oo xagga fikirka ah kaasi oo dad badan oo muslimiin ah ay ku wareeraan.
duulaanka gaalada ee xagga fikirka ayaa beegsanaya jiilalka mustaqbalka iyadoo dadka muslimiinta ee hadda noolna lagu qaldaayo magacyo kor malab ka ah oo qaarkood amaan aan u qaadano balse si hoose xanbaarsan fikir saliiibi ah.
hoos ka aqriso magacyada aan isticmaalno qaarkood oo fikir weyn xanbaarsan
Heerka ugu sarreeya jaamacadda ee afka ingiriisiga marka laga soo gaabiyo lagu yiraahdo PHD marka afka carbiga lagu micneeyana noqoneysa”دكتورة “diktoora)ayaa ah marxaladda ugu danbeeysa ee qofka ka gaaro waxbarshada waqtigan casriga ah.
Hadaba su,aasha is weydiinta mudan ayaa ah xagee buu ka yimid magaca(Diktoora) oo ah darajo sare oo loo tiiriyo qofka cilmiga jaamacadda ka gaaro heerka ugu sarreeysa.
Baaritaan dheer oo ay sameysay shabakadda baahisa wararka qarsoon ee xaqiiqonews ayaa lagu ogaaday in ereyga (diktoora) uu xanbaarsanyahay macno ka weyn kan ay dadka caadiga ah u isticmaalaan.
Kalimadda oo asal ahaan ka soo jeeda afka cibraaniga ee looga hadlo isra,il ayaa ka gooban laba erey oo isa saran waxa ayna yihiin(DIK) oo micnaheedu yahay “wadaad” ama sheikh iyo “Toora” oo loola jeedo kitaabka toored ee lagu soo dajiyey nabi ciise CSW sidaa darted kalimadda(Diktoora) micnaheeda oo buuxa waa ( wadaadka tooreed) oo loola jeeda in qofka qaatay shahaadadan in uu yahay qof towered bartay .
7 up waa kalimad ku qoran caag yar oo ay ku jiraan cabitaanada gaaska leh balse dadka intooda badan isma weydiyaan magacan side buu ku baxay.
Waa kalimad ingiriisi ah oo micnaheedu yahay( 7 korkooda)
Baarayaasha shabakadda xaqiiqonews ayaa helay macluumaad ku saabsan cabitaanka 7 up oo ay sameyso shirkad laga leeyahay dalka yahuudda.
Waxaana sirta ku duugan magacan ey tahay iyagoo kala jeedo in qofka cabitaankan cabo uu tagaayo 7 samo(cir) korkooda ! (7 up) subxaanalaah !
Cabitaanka pepsi ayaa ka mid ah cabitaanada caan ka dhex ah bulshooyinka muslimiinta balse baaritaan dheer ka dib waxaa laga war helay in ereyga pepsi uu yahay xarfo la soo gaabiyey oo micno weyn xanbarsan.
Ereyga pepsi ayaa u taagan
P= pey(oo micnaheedu yahayn bixi)
E=Every day(oo la micno ah maalin kaste)
P=pound(oo ah lacagta laga isticmaalo wadamada yurub qaarkood)
S=Support(oo micnaheeda yahay taageero)
I=isra,il(oo ah wadanka yahuudda)
Si duuban waxa uu micnaheedu yahay bixi maalin kaste hal pound oo taageero u ah isra,il(yahuudda)
Sidaa darted halka pound ee aad ka bixisaa cabitaankaasi wax uu ku dhacayaa qasnadda yahuudda.
Dalka yahuudd aayaa caan ku ah magaca isra,il hadaba ma ogtahay in kalimadda isra,is ay tahay sida ku qoran kibtaabka towered kalimad ay ka gooban laba erey oo ah”isra” oo micnaheedu yahay “adoon” iyo “iil” oo micnaheedu tahay”raxmaan” oom magaca ilaah sw ah waxaana ay la micno noqoneysaa “adoonka ilaa” sidaa darted waxaa habboon in qofka muslimka uu isticmaalo kalimadda ah wadanka yahuudda, halkii uu isticmaali lahaa wadanka isra,il.
La soco qeybaha xigga ee barnaamijkan oo dhawaan la soo gelin doono innsha alaah